आठ लाख घुस रकम सहित उपकुलपति पक्राउ::Best News Experience from Nepal
आठ लाख घुस रकम सहित उपकुलपति पक्राउ
धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रष्तिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा. राजकुमार आरके रौनियार आठ लाख रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनलाई उनकै कार्यकक्षबाटै बिहीबार पक्राउ गरेको हो ।
प्रतिष्ठानको भवन निर्माणको भुक्तानीका लागि उनले ठेकेदारसँग घुस लिएका हुन् । घुस लिएर रौनियारले भतिज डा. रामहरि रौनियारलाई राख्न दिएका थिए । प्रतिष्ठानमै पढ्ने रामहरिको कोठाबाट घुस रकम बरामद भएको अख्तियार प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले बताए ।
डा. रौनियार तीन वर्षअघि प्रतिष्ठानमा नियुक्त भएका हुन् । नियुक्तिपछि विभिन्न खरिदमा करोडौँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेकै वेला उनी रंगेहात पक्राउ परेका हुन् । पैसा खर्च गरेर उपकुलपति नियुक्ति हुने नेतृत्वका कारण प्रतिष्ठानभित्र सधैँ चलखेल हुने गरेको प्रतिष्ठानकै कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
अख्तियारले यति उच्च तहको कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको पहिलोपटक हो । केही दिनअघि त्रिविका सहायक डिन शम्भु प्रसादलाई ५० हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ गरी मुद्दा दायर गरेको थियो ।